မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: Honeymoon to New Zealand Day 11: Magical Milford Sound
Honeymoon to New Zealand Day 11: Magical Milford Sound
၁၂ရက် မေလ ၂၀၁၅ (အင်္ဂါနေ့)
ဒီပိုစ့်လေးကို Milford sound သွားထားတာ တစ်နှစ်တိတိပြည့်တဲ့နေ့လေးမှာ စရေးဖြစ်ပါတယ်။ ခုထက်ထိရေးလို့မပြီးသေးတော့ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ စိတ်ဓာတ်ကျမိပါတယ်။ ထားပါတော့လေ။
Milford Sound သွားတဲ့အကြောင်းကို စောင့်မျှော်နေကြတဲ့သူတွေလဲ အတော်များမှာပါ။ သူက နယူးဇီလန်ရဲ့ နာမည်ကြီးနေရာကိုး။ ကိုယ်မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောရရင် သူက တောင်ထိပ်မှာ စုနေတဲ့ နှင်းတွေ အရည်ပျော်ပြီး ရေတံခွန်သေးသေးလေးတွေ အများကြီးအဖြစ် မတ်စောက်လှတဲ့ တောင်ကပါးရံတွေကနေ ပင်လယ်ထဲကို စီးကျနေတာလေ။ ကိုယ့်တုန်းကတော့ အရမ်းမှန်းသွားပြီး ရောက်သွားတော့ ဒီလောက်လဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လဲ ထူးခြားပြီး တခြားနေရာတွေနဲ့ မတူတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာက ရိုက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက အပြင်က လှတာကို မမှီပါဘူး။ ရေတံခွန်တွေကို သင်္ဘောနဲ့ အနီးကပ်ဆိုတော့ အားလုံးပါအောင်ရိုက်ဖို့က မလွယ်ဘူးလေ။ Drone နဲ့ဆိုရင်တော့ လှမယ်ထင်တယ်။ ရေတွေစင်တော့လဲ ကင်မရာက သိပ်မထုတ်ရဲလှဘူး။ ဒီတော့ အဲ့ဒိနေရာကို ခံစားဖို့ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်မှပဲ အတိအကျသိမှာပါ။ နယူးဇီလန် တစ်နိုင်ငံလုံးက မြို့တွေ Cover လုပ်ဖို့ အချိန်မရရင်တောင် Queenstown ကို တိုက်ရိုက် ပျံပြီး နေ့ချင်းပြန်ခရီးသွားလို့ရပါတယ်။
Milford Sound သို့ တနေ့တာ
Queenstown ကနေ Milford Sound ကို ကား ၄နာရီမောင်းရပါတယ်။ အသွားအပြန်ဆိုတော့ ၈နာရီကြာပါတယ်။ ဒီတော့ သွားမယ်ဆိုရင် အဲ့တစ်နေရာတည်းကို ၁နေကုန်အချိန်ပေးရပါမယ်။
မနက် ၅နာရီခွဲ အိပ်ယာထ
မနက် ၆နာရီခွဲမှာ Heartland hotel ကို Check out လုပ် အထုတ်တွေတော့ သူတို့ဆီပဲ အပ်ထားခဲ့။
မနက် ၆နာရီ ၃၅မိနစ် ကားထွက်စောင့်။ isite မှာ လက်မှတ် ဝယ်တုန်းက သူတို့က ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေပြီး အနီးဆုံး Pick up point ဟော်တယ်လမ်းထိပ်နားကို ၆နာရီ ၄၀ လောက် လာခေါ်မယ်လို့ပြောထားတော့ ကိုလဲ လိုရမယ်ရ စော ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒိနေ့မှာ ကံဆိုးချင်တော့ မိုးက ဖွဲဖွဲကျနေပါတယ်။ ရာသီဥတု ၁၀ ဒီဂရီအောက်မှာ ရွာနေတဲ့ မိုးဆိုတော့ ဘယ်လောက် အေးမလဲ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ ကိုယ်တွေလဲ အသင့်ယူလာတဲ့ တစ်ခါသုံး မိုးကာအင်္ကျီလေးအပေါ်ကထပ်ဝတ်ပြီး ပေပေတေတေပဲ ဟိုသစ်ပင်အောက်ခို ဒီသစ်ပင်အောက်ခိုနဲ့ စောင့်နေမိပါတယ်။ မနက် ၆နာရီခွဲလောက်ဆို နေမထွက်သေးပါဘူး။ အဲ့ဂိတ်မှာ ကျွန်မတို့ အပြင် ဘယ်သူမှလဲ မတွေ့ပါဘူး။ ခဏကြာတော့ အသက်ကြီးကြီး အဖွားကြီး ၂ယောက်လောက် ရောက်လာပြီး ပြန်ပျောက်သွားတော့ ကိုယ်ပဲ နေရာမှားသလားလို့ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်မိတယ်။ မိုးကလဲ ဖွဲလိုက် သဲလိုက်ဆိုတော့ မိုးကာအောက်က ဘောင်းဘီနဲ့ ဖိနပ်တွေဆိုတာ စိုရွဲနေပါပြီ။ ၆နာရီ ၄၀ ဆိုပြီး ၇ နာရီထိ မလာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီး သံသယဖြစ်လာတယ်။
ဒါနဲ့ အနီးနားမှာ မီးလင်းနေတဲ့ ဟော်တယ်လော်ဘီတစ်ခုမှာ ကားတွေ ရပ်တာတွေ့တာနဲ့ သေချာအောင် သွားမေးပါတယ်။ ကျွန်မတို့ စီးရမဲ့ ကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ ဟော်တယ်က အလုပ်သမားကို ကားစောင့်ရမဲ့နေရာကို ထပ်မေးတော့ ကျွန်မတို့ စောစောက စောင့်နေတဲ့ နေရာက မှန်တယ်တဲ့။
မနက် ၇နာရီ ၅မိနစ် - ဒါနဲ့ မိုးရေထဲ အဲ့နေရာကို ပြန်လာတော့ ကားက ရောက်နေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကိုပဲ သူက ပြန်စောင့်နေတဲ့ ပုံမျိုးပေါက်သွားလို့ စိတ်ထဲတော့ ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ချင်ပါတယ်။ နောက်ကျတာက သူတို့လေ။ အဲ့လိုမှန်းသိ Queenstown မြို့ထဲ လမ်း ၁၅မိနစ်လောက်လျှောက်လိုက်တာနဲ့ ဂိတ်စ isite ကနေပဲ သွားစီးပါတယ်။ အဓိကက မိုးရွာလို့ သေချင်စော်ကို တော်တော်နံသွားတယ်။
The Remarkable နှင်းတောင်တန်းတွေနဲ့ နီးသတက်နီးလာသလို
ကားပေါ်တက်တော့ စိုနေတဲ့ ဘောင်းဘီအောက်ပိုင်းနဲ့ ဖိနပ်၊ ခြေအိပ်တွေက အတော်လေး နေရခက်ပါတယ်။ အော်ငိုချင်စိတ်ပါပေါက်တယ်။ ချွတ်ထားလို့ အနံ့ထွက်မှာလဲ စိုးသေးတယ်လေ။ ကားမောင်းရင် မနက် ၉နာရီခွဲလောက်ကျတော့မှ kiwi country shop ဆိုတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တွဲရက်နေရာလေးမှာ ကားခဏရပ်ပါတယ်။ အဲ့မှာတော့ မနေနိုင်လို့ ကျွန်မခြေအိတ် အသစ်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ Mr.Right ကိုလဲ မချမ်းဘူး မချမ်းဘူးနဲ့ ရှေ့ဆက် နှင်းတောင်ခြေသွားမှာဆိုတော့ ချမ်းမှာ သိတာနဲ့ လက်အိတ်ဝယ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒိဆိုင်မှာပဲ ကြုံတုန်း နယူးဇီလန်ရဲ့ နာမည်ကြီး ဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့လဲ သူတို့ပြောတဲ့ Manuka (မနူကာ အပင်) နဲ့ ပျားရည်ဆပ်လုပ်ထားတဲ့ Moisturizer ဘူးလေးပါ ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ လက်အိတ်၊ ခြေအိတ်၊ Moisturizer စုစုပေါင်း NZD 35.80 ကျပါတယ်။
မနက်စာကိုတော့ Hot chocolate နဲ့ muffin လိုဟာကို အောင့်အီးစားလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ Milford Sound ရောက်ရင်လဲ စားသောက်ဆိုင်တော့ ရှိလောက်ပါတယ် ထင်ထားခဲ့တာ။ အမှားကြီးမှားတာပဲ။ ကိုယ်တွေက လက်မှတ်ဝယ်တုန်းကလဲ ကိုယ်မကြိုက်တာတွေ ကျွေးမှာစိုးလို့ Lunch မပါတာဝယ်ခဲ့တာ။ Tourist attraction ဆိုတော့ စားသောက်ဆိုင်တော့ ရှိသင့်တာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုမှာ snack ရောင်းတဲ့ Vending machine လေးပဲ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
မနက် ၁၀နာရီ ၄၀ လောက်မှာ The Remarkable လို့ခေါ်တဲ့ နှင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့ View point လို့ နေရာမျိုးမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကားခဏရပ်ပေးတယ်။ ကားပေါ်ကလူတွေနဲ့လုရိုက်ရမှာရော၊ တောင်ကြီးတွေက အပြင်မှာ အရမ်းလှပေမဲ့ ဓာတ်ပုံထဲကျတော့ တိမ်တွေဖုံး ပြီး သိပ်မလှတာရော၊ အရမ်းအရမ်းချမ်းလွန်းလို့ ကြောက်ပါပြီ အော်နေရတာရော ကြောင့် ဓာတ်ပုံ ကောင်းကောင်းမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ Mr.Right ကတော့ ကျွန်မကို အင်္ဂလန် လိုမျိုးမှာ နေရင်တော့ နင်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး လှောင်သေးတယ်။ (နောက်နေ့ နှင်းတောင်ထိပ်တက်မှ သူ့အတင်းဆက်ခုတ်မယ်နော်)။ အမှန်တော့ မိုးရေစိုလို့ ချမ်းတယ်ထင်တာပဲ။ သူများတွေတော့ ဒီလောက်ချမ်းနေပုံမရဘူး ဘာလို့ ကိုယ်ပဲ ခိုက်ခိုက်တုန်းချမ်းနေသလဲ မသိတာ။ ချမ်းရင် အပေါ့သွားချင်မှာလဲ ကြောက်ရသေးတယ်။ သူတို့ကားက ရပ်ပေးတဲ့ အချိန်ပဲ သွားရတာကို။
The Remarkable တောင်တန်းတွေကို အနီးကပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ view point တစ်နေရာ။ (အရမ်းချမ်းတယ်)
မရမက တောင်တန်းနဲ့ ရိုက်ချင်တာ... အလင်းဗြောင်းဗြန်ဆိုတော့ ဒီလောက်ပဲရတယ်။
ချမ်းလွန်းလို့ ကားဆီ အမြန်ပြန်ပြေး
လမ်းတစ်လျှောက်လဲ ရေတံခွန်တွေ ရေခဲမြစ်/ချောင်းတွေ ဖြတ်လာတာ လှမှလှပါပဲ။ တကယ်ကိုပဲ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရတဲ့ အလှတရားတွေပါ။
၁၁နာရီ ၅၀ လောက်မှာလဲ ရှုခင်းလှတဲ့ တစ်နေရာမှာ ခဏရပ်ပေးသေးတယ်။ တောင်ကြီး ၂လုံးကြားကနေ အဝေးက ရေခဲတောင်တွေကို မြင်နေရတဲ့ နေရာ။ ကားပေါ်မှာ အိန္ဒိယမိန်းမ ၃ယောက်ပါလာတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း သူတို့ကလဲ ပြည်ကြီးတွေနဲ့ လူမှုရေးနာမလည်ရာမှာ နင်လားငါလားတွေလေ။ ဗျူးပွိုင့်ခဏရပ်ပေးတာ အလှည့်ကျ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်မရှိဘူး။ သူတို့ချည်းပဲ မပြီးတာ။ မတ်တပ်ရပ်ရိုက်၊ ခုန်ပျံရိုက်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ကင်းမီးဂေါက်ပါထောင်ရိုက်ချင်ပုံရတယ်။ ကိုင်ထားတော့ DSLR ပြီးတော့ အော်တိုမု ပဲ သုံးတတ်ပုံရတယ်။ Flash ကြီးက တဖျက်ဖျက်။ ကားပေါ်မှာ ရှုခင်းလှတဲ့ နေရာတွေရောက်ရင်လဲ Flash တဖျက်ဖျက်နဲ့ ကားထဲကနေရိုက်ရတာ အမော။ ထွက်လာမဲ့ ပုံတွေကို ကိုယ်က စိတ်ကူးကြည့်မိတယ်။ ကားမှန်က reflection နဲ့ဆိုရင် “အမီနာ Photography” က အတော်လေးကို လှတပတတွေရမှာ။ ကိုယ်နဲ့ Mr.Right ကတော့ အစက စိတ်တိုပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ တိတ်တိတ်လေးပဲ ရီနေရတယ်။ သူတို့နဲ့လဲ ပြိုင်တိုးပြီး မရိုက်တော့ဘူး။ အဝေးကရိုက်လဲ ရှုခင်းက ပါတာပါပဲ။ ရပ်ပေးတဲ့ အချိန်ကို ကျော်ပြီး မပြီးနိုင်မစီးနိုင်လုပ်နေကြလို့ ကားသမား ခေါ်တာလဲ မလာကြလို့ ထွက်တော့မယ်လုပ်တော့မှ ပြေးလာကြလို့ တစ်ကားလုံးက သူတို့ကို ဘယ်လိုဟာတွေလဲ ကြည့်တာ ခံလိုက်ရတယ်။
နောက်ထပ် ရပ်ပေးတဲ့ View Point တစ်နေရာ။ (အဲ့ဒိနေရာမှာ အနီနဲ့ မိန်းမ အုပ်စု သူများကို နေရာကို မဖယ်ပေးတာ)
ကိုယ်တောင် ကားပေါ်ပြန်ရောက်နေပြီး ခုန်ပြီး ရိုက်နေကြပြန်ပြီ။ (ကင်းမီးကောက်ထောင်ရိုက်ပါလား)
ကားဖြတ်သွားတဲ့ တံတားတဖက်က ချောင်းလေး။ (ကားရဲ့ ညာဘက်)
ကားရဲ့ ဘယ်ဘက် တောင်တန်းပေါ်က စီးကျလာတဲ့ ရေတံခွန် (ကားရဲ့ ဘယ်ဘက်က)
ဒီနှင်းတောင်ကြီးတွေက နှင်းတွေ ပျော်ကျတာပေါ့
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ အလှတရားတွေ ခံစားတော့မယ်။ (တောင်ပေါ်က စီးကျနေတဲ့ ရေစီကြောင်းသေးသေးလေးတွေ)
နှင်းတောင်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကို ကိုယ်ရောက်အောင် သွားဖူးတဲ့အတွက် ကျေနပ်တယ်။
နေ့လည် ၁၂နာရီ လောက်မှာ Milford Sound သင်္ဘောဆိပ်ကိုရောက်တယ်။ ခဏစောင့်ပြီးတော့ သွားရမဲ့ အပျော်စီး မော်တော်ဘုတ်အကြီးစားပေါ်ကို တက်ရတယ်။ Vending mechine က အာလူးကြော်အထုတ်သေးလေးကလွဲကို ဘာမှ စားစရာမပါဘူး။ ဘုတ်ပေါ်မှာတော့ လဘက်ရည်၊ ကော်ဖီက Free flow ကြိုက်သလောက် သောက်လို့ရတယ်။ စစချင်းတော့ အဲ့ဒိဘုတ်ရဲ့ အပေါ်ထပ်လေးကိုတက်ပြီး အပြင်မှာ ထိုင်ကြတာပေါ့။ အောက်က ထိုင်ခုံတွေနဲ့ အထဲက အခန်းထဲ ဘယ်သူမှ မနေချင်ဘူး။ တကယ်လဲ ဘုတ်ထွက်ရော၊ လေကအေး။ ရေငွေ့တွေက မျက်နှာလာရိုက်၊ ရေတံခွန်တွေနားရောက်ရင် ရေမှုန်တွေစင်လို့ ဘုတ်သေးသေးပေါ်မှာတောင် ဘယ်တွေ ပျောက်ကုန်ကြလဲ မသိဘူး။ ကိုယ်လဲ အပေါ်မှာ လူများလို့ စောစောစီးစီး အောက်ဆင်းလာလိုက်တယ်။ ဘုတ်အနောက်ပိုင်းလေးမှာတော့ အေးအေးဆေးဆေးရှိလို့ အဲ့မှာ ခဏထိုင်နေသေးတယ်။ နောက်တော့ ဘုတ်အရှေ့ပိုင်းဘက် သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဘုတ်အရှေ့ပိုင်းမှာက ရှုခင်းလှတယ်ဆိုပေမဲ့ လေတအားတိုက်တယ်လေ။ ဘယ်သူမှ ကြာကြာမနေနိုင်ကြတော့ ပြောစရာမလိုပဲ အလှည့်ကျလိုဖြစ်နေတယ်။
Milford Sound ကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း မတ်စောက်တဲ့ တောင်ကြီးတွေပေါ်ကနေ ပျော်ကျလာတဲ့ နှင်းတွေကနေ ရေတံခွန်တွေ အများကြီး ပတ်ပတ်လည်စီးဆင်းနေတဲ့ နေရာပေါ့။ ကိုယ်က အစက ကနေဒါနဲ့ ယူအက်စ်နယ်စပ်က Niagara ရေတံခွန်လို ရေတွေများကြီးထင်တာ။ သူက ရေတံခွန်တွေတော့ အများကြီးဖြစ်နေပေမဲ့။ အားလုံးက ရေတံခွန် သေးသေးလေးတွေ။ စာထဲမှာဖတ်ရတာတော့ အဲ့ရေတံခွန်တွေကလဲ အမြဲတစ်နေရာတည်းမှာ ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ သူက အပေါ်က ရေခဲပျော်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ စီးချင်သလို စီးနေကြတာလေ။ တချို့တလေ နည်းနည်းကြီးတဲ့ ရေတံခွန်တွေလဲရှိပါတယ်။
Milford Sound သင်္ဘောဆိပ်ရောက်ပြီ
အာလူးကြော် တစ်ထုတ်ကို အဖော်ပြုလို့
တောင်နံရံရယ်၊ ရေတံခွန်ရယ်၊ ပင်လယ်ဝရယ် သဘာဝတရားကြီးက မရိုးရအောင် ဆက်စပ်ပေးတတ်တယ်
သင်္ဘောက ရေတံခွန်တွေနားနီးနီးထိ ကပ်ပေးတယ်။ (ကင်မရာရေစိုမှာစိုးလို့ ပုံကောင်းသိပ်မရ)
သင်္ဘောအနောက်ဘက်မှာ လူလေးရှင်းနေတုန်း။ ကော်ဇီပူလေးတစ်ခွက်ကို အဖော်ပြုလို့ အအေးဒဏ်ကို အံတုနေတယ်။
ရေတံခွန်တွေနားမှာ သက်တံလေးတွေပေါ်နေတာ လှမှလှ
ကံကောင်းရင် အဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ သဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ ဝေလငါးတွေ၊ လင်းပိုင်တွေ၊ ပင်ကွင်း တွေကိုလဲတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့။ ကိုယ့်တုန်းကတော့ ပင်လယ် ဖျံလေးတွေ ကျောက်ဆောင်တွေပေါ် အနားယူနေတာပဲ တွေ့ခဲ့တယ်။ တိရိစ္ဆာန်ရုံထဲမဟုတ်ပဲ သဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဖျံအရိုင်းလေးတွေတွေ့ရတော့ စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးသလိုလို။ အစာမကျွေးဖို့တော့ အော်ထားတယ်။ သူ့စည်း ကိုယ့်စည်းနဲ့ နေကြတာ ကောင်းပါတယ်နော်။ ကိုယ်လဲ သင်္ဘောထိပ်အပြင်မှာ မှန်နားကပ်ပြီး နေရာလေးရတုန်း ပေထိုင်နေလိုက်သေးတယ်။ အချမ်းလွန်သွားရင် ထုံသွားပြီး မချမ်းတော့ဘူးလေ။ နောက်မှ Mr.Right က အထဲပြန်ဝင်မယ်ဆိုလို့ ဝင်လိုက်တော့ DSLR အိန္ဒိယအုပ်စုက အဲ့နေရာယူသွားတော့ ကိုယ်လဲ အထဲပဲ နေလိုက်တယ်။ အထဲမှာနေလဲ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ မရတာကလွဲလို့ အကုန်မြင်နေရတာပဲလေ။ ဓာတ်ပုံကလဲ ဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက် အပြင်က အလှနဲ့ ခံစားချက်ကိုမှ မမှီတာ။ ဒီတော့ moment ကိုပဲ ကော်ဖီလေးသောက်ပြီး ခံစားနေလိုက်တယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ နေ့လည်စာ ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကို အသားညှပ် Sandwich တွေ လိုက်ဝေတယ် ကောင်းမဲ့ပုံပဲ။ ကိုယ်စားလို့ရလောက်တဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ အဲ့ကျတော့ ကိုယ် နေ့လည်စာမယူဘူးပြောမိတာ နောင်တရသွားတယ်။ ဆိုင်တွေ မရှိတာလဲပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ခန်းစာကတော့ Milford Sound သွားလို့ ကိုယ်စားစရာမယူသွားနိုင်ရင် နေ့လည်စာထည့်ဝယ်ကြပါလို့။
အပြန်ကျတော့ ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ ပတ်ပြပြီးလမ်းကျမှ ကားနဲ့ ပြန်ဆုံတာ လုပ်လို့ရတယ်။ အာ့က ဈေးတော့ ကြီးတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ ကပ်စေးနဲနေသေးတော့ မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီး ကားနဲ့ပဲ ပြန်လိုက်တယ်။ အဖွဲ့ထဲက အတွဲ ၂တွဲလောက်ကတော့ ဟတ်လီကော်ပတာနဲ့ ပြန်ကြတယ်။ အပြန်မှာလဲ အလာတုန်းက ခြေအိတ်ဝယ်တဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲ ရပ်ပေးတယ်။ အဲ့ဒိကော်ဖီဆိုင်လေးက Asian ရောင်းတာထင်ပါတယ်။ သူက cup noodle လဲ ရောင်းတယ်။ ကိုယ်လဲ တခြား muffin တို့ cake တို့ထက်စာရင် လျှာထိအာထိ ရှူးရှူးရှဲရှဲပဲစားချင်တော့ Cup Noodle ဝယ်လိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်ငွေရှင်းကလှည့်ကျမှ ဆိုင်က အလုပ်သမားလားဘာလားတော့ မသိဘူး အဖြူမနဲ့ကျတယ်။ တရုတ်မလေးက အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ သူ့ကို ရေနွေးလေးထည့် ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ အမှန်တော့ ဗူးဖောက် အထဲက အစာတွေ မလုပ်တတ်ရင်တောင် နောက်က သူတို့ ကော်ဖီဖျော်ရင်ထွက်တဲ့ ရေနွေးစက်ကနေ ရေနွေးလေးထည့်ပေးတာ ဘာခက်ခဲလဲတော့ မသိဘူး။ အဲ့ အဖြူမက ဗူးတောင် မဖောက်တတ်ရှာဘူး။ ဗူးမဖောက်တတ်တာက အဓိကမဟုတ်သေးဘူး။ သူ့မျက်နှာက ဒီလိုမျိုး မုန့်အစုတ်အပဲ့ကို အာရှသားတွေပဲ စားတယ်ဆိုတဲ့ လှောင်ချင်တဲ့ မျက်နှာမျိုးက လုပ်သေးတယ်။ အလုပ်ရှုပ်လိုက်တာလို့ ငြူစူချင်သလိုလို။ ပါးစပ်ကလဲ ဒါမျိုး ငါတစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး၊ စားတဲ့သူရှိတယ်လား ဆိုပြီး ပြောသေးတယ်။ သူတို့ဆိုင်မှာပဲ ရောင်းနေပြီးတော့ မပြောချင်ဘူး။ နောက်တော့ တရုတ်မလေးပဲ လာလုပ်ပေးတယ်။ ဒီလောက်လွယ်တာကို မလုပ်တတ်တဲ့ အဖြူမ ဒူတယ်ပဲ ထင်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဆိုင်မှာ ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကို မလုပ်တတ်တာ သူ့အပစ်။
အထဲမှာ Likeaboss
သဘာဝအတိုင်း လွတ်လပ်တဲ့ ဖျံလေးတွေ
ဒီရေတံခွန်ကတော့ တော်တော်လေး ကြီးတယ်။
ပြန်အုံးမယ် Milford Sound ရေ။ ကံမကုန်ရင် ပြန်ဆုံမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အဲ့ဒိနေ့က နေ့လည်စာကတော့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ဗူးနဲ့ အားလူးကြော်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါ NZD 5.80 ကျတယ်။
Checking into Backpacker Place, Blacksheep Hostel
အပေါ်ထပ်တက်တဲ့ လှေကားနားက ဆိုင်းဘုတ်နဲ့
ညနေ ၆နာရီလောက် Queenstown ပြန်ရောက်တော့မှ Heartland hotel ကနေ အထုတ်တွေသွားယူပြီး Blacksheep backpacker တည်းခိုခန်းလေးကို check in ဝင်ကြတယ်။ ဝင်းထဲက ၂ထပ်တိုက် တန်းလျားလို့ အဆောက်အဦးမှာ အောက်ထပ်က ၂ထပ်ကုတင်တွေနဲ့ အထဲမှာ မရှိဘူးဆို ၆ယောက်လောက်ရှိမယ်။ စုပေါင်း ဘုံသုံး မီးဖိုချောင်မှာလဲ ချက်ပြုတ်စားနေကြတာတွေ့တယ်။ အပေါ်ထပ်ကတော့ ၄ယောက်ခန်းနဲ့ ၂ယောက်ခန်းပေါ့။ ကိုယ်တွေက special Deluxe Room (သူတို့ဆီမှာ ရှိသမျှမှာ အကောင်းဆုံး) ယူထားတော့ အနည်းဆုံး အိမ်သာ ရေချိုးခန်း ပါပြီးသားမှတ်တာ။ တကယ်တန်းကျတော့ အိမ်သာ၊ရေချိုးခန်းက နောက်ခန်း ၂ခန်းလောက်နဲ့ မျှသုံးရတယ်။ ကျွန်မတို့ အခန်းနဲ့တော့ မဝေးပါဘူး။ ပြီးတော့ အောက်ထပ်ကလူတွေလဲ လာမသုံးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Blacksheep ကို အပေါစားဆိုပြီး အစကတည်းက မနေချင်တဲ့ Mr.Right တစ်ယောက်က သိပ်မကျေနပ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံပေးပြီးနေပြီလေ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ကိုယ်လဲ ကိုယ်နေချင်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်ကြိုက်လို့ ခေါ်လာပြီး ထင်သလို မဖြစ်တော့ အပြစ်ရှိသလို ခံစားနေရပါတယ်ဆိုမှ သူ့ရုပ်က အင်းမလုပ် အဲမလုပ် စိတ်တိုင်းမကျတဲ့ ပုံလုပ်နေတော့ ကိုယ့်မှာ ပိုစိတ်ညစ်ရတာပေါ့။ အမှန်တော့ သူက ကိုယ် အပြင်ထွက်ရေချိုးရမှာကို စိတ်မချတာ။ ကိုယ်လဲ အစပိုင်းတော့ တမျိုးကြီးလိုဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ရက်တွေကျတော့ နေသားကျသွားတော့လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘိုမတွေတောင် ဒီလိုပဲ ချိုးနေကြတာ။
ဒါ ကျွန်မတို့ နေခဲ့တဲ့ အခန်း (ပုံကတော့ internet က ယူထားတာ) ရိုက်ဖို့ မေ့လာလို့
အခန်းလေးကတော့ အခြေခံ အိပ်ယာခေါင်းအုံး၊ တီဗွီ၊ ဗီဒို၊ အပူစက် အကုန်ရှိပါတယ်။ ပုတင်းပေါက်လေးကနေ The Remarkable နှင်းတောင်တန်းကြီးကိုလဲ လှမ်းမြင်နေရသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Heartland Hotel ကြီးထက်သာပါတယ်။ နောက်ထပ်သာတာက သူက Unlimited Free Wifi ရတယ်။ New Zealand က ဘယ်ဟော်တယ်ကြီးတွေမှာမှ အင်တာနက် အလကားမရခဲ့ဘူး။ နေခဲ့တဲ့ Rotorua က လမ်းဘေးဟော်တယ်နဲ့ ခု ဒီ Backpacker နေရာမှာပဲ အင်တာနက် အလကားရတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲတော့ မသိဘူး။ ၂ခုလုံး ဒေါ်လာ ၁၀၀အောက်တွေချည်းပဲ။
အဲ့ဒိ backpacker hostel မှာ အာရှသားဆိုလို့ သူနဲ့ ကိုယ် ၂ယောက်ပဲရှိတယ်။ ကျန်တာတွေအကုန် အနောက်တိုင်းသားတွေချည်းပဲ။ တချို့က လချီပြီး ရက်ရှည်နေကြတယ်လို့လဲ ကြားတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ဆို တစ်ယောက်က ခွေငှားလာရင် Reception ရှိတဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ စုပြီး Movie night လုပ်ကြသေးတယ်။ သူတို့ဟာနဲ့ သူတို့တော့ ဟုတ်နေတာပဲ။ သူတို့အခန်းထဲနေတာထက် အဲ့ Reception ရှိတဲ့ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာတွေပေါ်မှာ သူတို့အိမ်ကျနေတာပဲ laptop ကိုယ်စီနဲ့ ထိုင်နေကြတယ်။
နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်က ဗီဒိုတွေထဲဆိုရင်လဲ ပစ္စည်းတွေကို နာမည်တွေနဲ့ သူတို့ Check Out ရက်တွေပါ တပ်ထားရတယ်။ ညဘက် ဟင်းဝင်ချက်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့ သူတို့ချက်နေတာနဲ့ ပြည့်နေတာပဲ။ စစချင်းတော့ Backpacker နေရာမျိုးမှာ ကိုယ်က ပထမဆုံးနေဖူးတာဆိုတော့ တမျိုးတော့ ဖြစ်သွားပေမဲ့ (ဒါတောင် ကိုယ်က သီးသန့်ခန်းငှားနေလို့) နောက်ပိုင်းကျတော့လဲ သူ့ဈေးလေးနဲ့သူ ရှုခင်းဘာညာမြင်ရပြီး နေပျော်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် Blacksheep ကို သူ့ဈေးနဲ့သူ သဘောကျတဲနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
Blacksheep ရှေ့က Black cat လေး အချွဲပို၊ သူလေး ချမ်းနေမလား...
နေမဲ့သူတွေလဲ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် စာတမ်းထိုးထား
spa ရှိတယ်ဆိုပြီး book ပေမဲ့ spa က ပိတ်လို့ မသုံးဖြစ်၊ ဖွင့်လဲ သုံးဖြစ်မယ်မထင်၊ သေးသေးလေးမို့ (Mr.Right ကလဲ ကြိုက်မှာ မဟုတ်)
ဟိုးနောက်က ကန်သေးသေးလေးက spa pool တဲ့.. ဟီး (ဒါမဲ့ view တော့ ကောင်းတယ်)
အဲ့ဒိညလဲ Asia Food court မှာပဲ ယိုးဒယားဆိုင်က ထမင်းမှာစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ညစာ ပုံထဲက ထမင်း ၂ပွဲ ဟင်း ၂ပွဲကို NZD 27.80 ကျတယ်။
ယိုးဒယားစာနဲ့ ၂ပါးထပ်သွား (ငရုတ်ကောင်းစေ့တွေများလွန်းလို့ မနည်းဖယ်စားရ)
နောက်နေ့တော့ Gondola ပေါ်မှာ zipline သွားစီးတဲ့ အကြောင်းပေါ့။
Honeymoon to New Zealand Day9 (Part -1): Experiencing Bluebridge Ferry
Honeymoon to New Zealand Day9 (Part -2): To Christchruch
Honeymoon to New Zealand Day10: To Queenstown
Posted by mabaydar at 4:49 PM
mabaydar ေရဖတ္ပီးသြားပါပီ။ ရွဳခင္းေတြအရမ္းလွတယ္ေနာ္ ဓာတ္ပံုရိုက္တာလည္းအရမ္းမိုက္တယ္mabaydar Pose ေတြလည္းလွပါတယ္၊တကယ္ကိုသြားခ်င္တယ္ပိုက္ဆံစုလိုက္ပါဦးမ်ယ္:D အားေပးလ်က္ပါ၊
5/16/2016 7:18 PM
႐ႈခင္း ပံု ေတြ အရမ္း လွ တယ္။ ျကည့္ ျပီး သြား ခ်င္တာ။ အေသးစိတ္ေရး ေပး တာ ျကိုက္ တယ္။ တကိုယ္ေတာ္ ပံု ေတြ က လည္း လွတယ္။
5/16/2016 10:17 PM
5/16/2016 10:18 PM
5/16/2016 10:29 PM
လွပတဲ႔ ပံုေလးေတြ အတြက္ ေက်းဇူးပါ .
5/17/2016 8:21 AM
မေဗဒါရဲ႕ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ေရးထားတဲ႔စာေတြအတြက္ မေဗဒါရဲ႕ ေစတနာကို တန္ဖိုးထားလို႔ဆိုရင္ပိုမွန္မလားဘဲ း) စာေတြကိုအေသးစိတ္ေရးၿပီးေတာ႔ ေတာင္းဆိုသမွ် စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေရးတတ္တာ မေဗဒါရဲ႕ ေစတနာေလ း)
5/17/2016 11:31 AM
5/17/2016 12:23 PM
ခရီးသြားပို့စ္ေလးေတြဆို အၿမဲဖတ္ၿဖစ္တယ္။ Travel blog ေရးတဲ့ပံုစံေလးကိုၾကိဳက္တယ္။ အၿမဲပဲအေသးစိတ္ေရးေပးပီး ေစတနာပါပါနဲ.စိတ္၀င္စားေအာင္ေရးတတ္လို. ကိုယ္ခရီးသြား၇င္ Reference လုပ္လို.ရတယ္ဆိုပီးအၿမဲေတြးၿဖစ္တယ္။ ေနာက္ပို့စ္ေလးေတြလဲေရးပါအုန္း အခ်ိန္ရရင္ :D
ဒါပဲ ဒါပဲ စိတ္ဝင္စားနာဒါပဲ စက္တင္ဘာေလာက္သြားဖို႕ စီစဥ္ေနတယ္။ ေျခေနမေျပာင္းရင္ ဟိ အဲခါက်ထပ္ခါတလဲလဲလာဖတ္အုန္းမွာ
6/03/2016 2:50 PM
@Yummmmm, ဟုုတ္လား... အာ့ဆိုု ၂ရက္က်န္တာ အျမန္ေရးမွ ထင္တယ္....
6/03/2016 6:58 PM
Honeymoon to New Zealand Day 11: Magical Milford S...